Ivermectin 1% + Closantel 10% jekiseni - China Chongqing Fangtong
Ivermectin 1% + Closantel 10% jekiseni
Chitarisiko Inguva rinopenya kuti brownish tsvuku dzakajeka zvokunwa. Zvinoumba nerimwe Rine mamiririta rine: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg. Chiratidzo Nokuti kurapwa zvakavhenganiswa trematode (fluke) uye nematode kana arthropod infestations nokuda gastrointestinal roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, mites uye inda dzezvipfuwo. Gastrointestinal roundworms Ostertagia ostertagi (kusanganisira larval chinovatadzisa matanho), Ostertagia lyrata (mukuru), Haemonchus placei (mukuru uye saibva), Trichostrongylus axei (mukuru uye ...
Inguva rinopenya kuti brownish tsvuku dzakajeka zvokunwa.
Mumwe Rine mamiririta rine: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg.
Nokuti kurapa zvakavhenganiswa trematode (fluke) uye nematode kana arthropod infestations nokuda gastrointestinal roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, mites uye inda dzezvipfuwo.
Ostertagia ostertagi (kusanganisira larval chinovatadzisa matanho), Ostertagia lyrata (mukuru), Haemonchus placei (mukuru uye saibva), Trichostrongylus axei (mukuru uye saibva), Trichostrongylus colubriformis (mukuru uye saibva), Cooperia oncophora (mukuru uye saibva), Cooperia punctata ( mukuru uye saibva), Cooperia pectinata (mukuru uye saibva), Oesophagostomum radiatum (mukuru uye saibva), Nematodirus helvetianus (mukuru), Nematodirus spathiger (mukuru), Strongyloides papillosus (mukuru), Bunostomum phlebotomum (mukuru uye saibva), Toxocara vitulorum ( mukuru), Trichuris spp.
Dictyocaulus viviparus (mukuru uye 4th Danho mazana).
Chiropa Fluke (trematodes)
Fasciola gigantica, Fasciola anemone.
Mabatirwo fluke pa vhiki 12 (vakura)> 99% efficacy.
Mabatirwo fluke pa 9 mavhiki (mushakabvu saibva)> 90% efficacy.
Mombe grubs (parasitic nzendo)
Psoroptes ovis (syn 'P communis gat bovis), Sarcoptes scabiei gat bovis.
IVERTEL Hazvisi intravenous kana intramuscular kushandiswa.
Avermectins murege zvakanaka akashivirira ose asiri chipfuro marudzi (nyaya asingashiviriri pamwe dzinouraya Mugumisiro
vari inotaurwa imbwa kunyanya Collies, Bobtails, Old Chirungu Sheepdogs uye anoenderana dzinoita kana michinjikwa,
uyewo nenjiva / nekamba).
Usashandisa vanenge anozivikanwa hypersensitivity kuti unorapa.
Regai pa concomitantly pamwe chlorinated yeimwe. The mugumisiro neGhebha agonists vari yakawedzera ivermectin.
Zvokungwarira CHAIWO FOR SHANDISA
Mishonga hunopfuura 10ml zvinofanira jekiseni mune nzvimbo mbiri dzakasiyana kuti kuderedza Inopera kusanzwa kana nezviito panguva jekiseni nzvimbo.
Hakukurudzirwi kutarisira chigadzirwa apo Hypoderma lineatum mazana vari vemunyika mune periaesophagic nharaunda, kana apo Hypoderma bovis mazana vari rakamiswa mune musana mugero. Tsvaka nyanzvi wemhuka zano kusarudza zvakanaka nguva kushandiswa.
Chipimo chemushonga AND Administration Route
1 Rine mamiririta por 50 makirogiramu. muviri uremu, yakaenzana 200 mcg / makirogiramu Ivermectin uye 2 MG / makirogiramu Closantel.
Single mishonga ine 4.0 MG / makirogiramu ivermectin (ka20 zvavakabvumirana chipimo chemushonga) raitongwa subcutaneously, kuguma ataxia uye kuora mwoyo. Hapana mushonga rakazivikanwa. Symptomatic kurapwa zvingabatsira.
Signs overdosage pamusoro Closantel ingasanganisira kurasikirwa kudya, ungaderedza chiratidzo, inotsikwa faeces ikawanda kakawanda defaecation. High mishonga angaita upofu, hyperventilation, hyperthermia, mukuru muutera, inco-kugadzwa, kugwinha, tachycardia uye muzviitiko rufu. Mabatirwo overdosage iri symptomatic sezvo pasina mushonga rakazivikanwa.
Meat: Mazuva 35.
Hakubvumirwi kushandiswa mune mombe zvibereko mukaka rinodyiwa nevanhu.
Usashandisa mune dzisiri lactating nomukaka mhou kusanganisira pamuviri mhuru izvo chinangwa kubereka mukaka
rinodyiwa nevanhu mumazuva 60 kutarisirwa parturition.
Usashandisa chero closantel tubhokisi zvigadzirwa munguva 35 zuva kurega nguva.
Mune 50ml kana 100ml bhodhoro.
KUCHENGETA ZVEKUDYA NEZVEKUSHANDISA
Zvikachenge- inotonhorera, yakaoma uye rima nzvimbo.
Next: ivermectin jekiseni 1%
Ivermectin + Closantel jekiseni